चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बहुमतले पारित Kasthamandap Daily
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बहुमतले पारित
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।
विधेयकमा भएको विवादित विषयमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार हुबहु पारित गरिएको हो ।
विधेयकको पक्षमा सत्तारुढ दलका १४ जना सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा प्रतिपक्षका ४ जनाले मत दिएको बताइएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोकिएको छ । कांग्रेसले भने विपक्षमा मत दिएको छ । कांग्रेसले भने डा। केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै प्रतिवेदन पास हुनुपार्ने मत राखेको छ ।
यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउदै डा। गोविन्द केसीले अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले संशोधन गर्न सकिने भन्दै केही दिन समय मागेपछि डा. केसीले आजसम्म अनसन स्थगन गरेका थिए ।